Daawo Sawiradii Ugu Danbeeyay Ee Laga Soo Qaaday Wadooyinka Magaalada Muqdisho.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: March 20, 2014, 10:19 am
Hay’adaha Turkiga ee kusugan Magaalada Muqdisho ayaa Caasimada waxa ay kawadaan mashaariic kala duwan oo dalka lagu hor marinayo, sidoo kale wax loogu qabanayo dadka Soomaaliyeed oo mudo Sanado ah Dowlad la’aan ku jiray.
Magaalada Muqdisho ayaa hada waxaa kasocda Mashaariic aad u muhiimsan oo wax badan ka taraya hormarka Magaalada ,waxaana la dhisay oo laamiyo qurux badan la saaray qaar badan oo kamid ahaa laamiyadii ku bur buray Dagaalada sukeeye.
Qaar kamid ah Laamiyadii dhawaan la dhisay gaar ahaan Laamiga Maka Al-Mukarama ayaa hada waxaa mar kale ka bilowday gacantii labaad oo laami lagu saarayo , waxaana horey loo saaray laami ,mid kale ayaana hada bilowday in lasii saaro.
Shacabka Magaalada Muqdisho ayaa aad ugu faraxsan una soo dhaweeyay dadaalada ay Dowlada Turkiga gacanta kusiineyso Dadka Soomaaliyeed uguna dhiseeso Meelo badan oo mmuhiim ah oo bilicda Magaalada Muqdisho ka qeyb qaadanaya.
Waa Maxay Dhalinyarnimo “Qormo Cajiib Ah Oo Ku Saabsan Dhalinta Maanta”..